वर्षमान पुन उपचारका लागि थाइल्याण्ड प्रस्थान Canada Nepal
वर्षमान पुन उपचारका लागि थाइल्याण्ड प्रस्थान
काठमाडौं - पूर्वमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुन थाइल्याण्ड प्रस्थान गरेका छन् ।
उनी आफ्नो थप उपचारको लागि बुधबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थाइल्याण्ड प्रस्थान गरेका हुन् । पुनसँगै पूर्वसभामुखसमेत रहेकी पत्नी ओनसरी घर्ती पनि थाइल्याण्ड गएकी हुन् ।
जण्डिसको वंशाणुगत समस्या भएका उनलाई थप समस्या देखिएपछि उपचारका लागि थाइल्याण्ड लगिएको जनाइएको छ।
उनको सचिवालयका अनुसार पुनले थाइल्याण्डको बैंककस्थित समितिभेज अस्पतालमा उपचार गराउने तयारी रहेको छ। यसअघि पुनले सुमेरु अस्पतालमा उपचार गराएका थिए।
आश्विन १३, २०७८ बुधवार ०८:२४:२६ बजे : प्रकाशित
नेपालमा एकैदिन ५ सय ४५ जनामा कोरोना संक्रमण, सक्रिय संक्रमित कति ?
काठमाडौँ। सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर थप ५ सय ४५ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ ।
बुधवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार ८ हजार ५ सय ४९ वटा परीक्षण गर्दा ५ सय ४५ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । यससँगै कूल संक्रमितको संख्या ८ लाख ७ हजार ५ सय २२ (पीसीआर टेस्टबाट) र (एण्टीजेनबाट) ९३ हजार ७ सय ७१ पुगेको छ।
साथै पछिल्लो २४ घण्टामा ७ सय २६ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या ७ लाख ८४ हजार ८ सय ८१ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै हालसम्म सक्रिय संक्रमित ११ हजार ३ सय १५ जना रहेका छन् ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएका र त्यसअघि भएका गरी थप ८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ११ हजार ३ सय २६जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्तिक ४, २०७८ बिहिवार १८:१५:०५ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - कतै तपाईंको हतारमा बिर्सने वा बारम्बार गल्ती गर्ने बानी त छैन! आत्तिनुपर्दैन। नियमित ध्यानको अभ्यासले तपाईंको यो बानी सुधार आउन सक्छ। अमेरिकाको मिसिगन स्टेट युनिभर्सिटीको पछिल्लो अनुसन्धानले ध्यानको नियमित अभ्यासले कुनै पनि व्यक्तिको गल्ती गर्ने आदत घटाउन मद्दत पुग्ने देखाएको छ।
पछिल्लो समय माइन्डफुलनेसले आममानिसको ध्यानाकर्षण गरेको छ। त्यही सन्दर्भमा लिनले रिसर्चरको सानो टिम बनाएर न्युरोवैज्ञानिक पद्धति अपनाएर ध्यानको मनोवैज्ञानिक र कार्यदक्षता प्रभावबारे अध्ययन गरिरहेका छन्।न्युज कारखाना
कार्तिक ५, २०७८ शुक्रवार ०६:३३:२० बजे : प्रकाशित
सरकारले १२ वर्षभन्दा माथिका किशोरकिशोरीलाई दिन लागेको फाइजर खोप कति प्रभावकारी ?
काठमाडौं - सरकारले १२ वर्षभन्दा बढी उमेरका किशोरकिशोरीलाई कोभिड–१९ विरुद्ध अमेरिकी कम्पनी फाइजर–बायोएनटेकद्वारा उत्पादित फाइजर खोप दिने तयारी गरेको छ। पछिल्लो समय फाइजर खोपलाई ‘कोमिर्नेटी’का नामले पनि चिनिन्छ।
गम्भीर एलर्जीको समस्या भएका व्यक्तिले फाइजर खोप लगाउँदा जटिलता आउनसक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था खोप नलगाउन सीडीसीले आग्रह गरेको छ। पहिलो डोज खोप लगाए जटिल एलर्जीको समस्या आएमा दोस्रो डोज लगाउनु हुँदैन। एलर्जीको समस्या बढ्दै गएमा बिरामीलाई उचित मेडिकल केयर उपलब्ध गराउनुपर्छ। न्युज कारखाना
कार्तिक ५, २०७८ शुक्रवार १८:२८:१४ बजे : प्रकाशित